Iselfowuni "ephezulu" ukusuka kwisizini ephelileyo iseyindlela elungileyo | Zonke iinkonzo ze-intanethi
URafa Rodríguez Ballesteros | | Iiselfowuni, Izaziso
Sibona inani elikhulu lokuqaliswa kwezi ntsuku. Phakathi kwabo, uninzi lweemodeli ze-smartphone ezilindelweyo ngalo mzuzu. Izolo, ngaphandle kokuqhubeka, i-smartphone eyaziwayo yeGoogle, iPixel 3, kunye nomntakwabo omdala uPixel 3 XL bafika kwimarike. Kodwa kuyenzeka ukuba ezi fowuni, njengommiselo ngokubanzi, azifumaneki kuyo nayiphi na ipokotho.
Kungenxa yoko le nto namhlanje sikunika ukhetho olugqwesileyo lokufumana i-smartphone enamandla ngexabiso elifanelekileyo. Ukuba ngoku ujonge i-smartphone enohlahlo-lwabiwo mali olunqunyelweyo, usenokungacingi ngokujonga ukukhutshwa kwangoko. Kodwa, Ngaba ukuphela konyaka ophelileyo kuyindlela embi? Ngokuqinisekileyo akunjalo.
1 I-Galaxy S8 okanye iPixel 2 zisesezona zixhobo zibalaseleyo
2 I-smartphone ephezulu, enamandla, kodwa engabizi
I-Galaxy S8 okanye iPixel 2 zisesezona zixhobo zibalaseleyo
Kuyinyani ukuba imodeli nganye entsha Iselfowuni ye-Samsung Galaxy hlaziya kuhlobo lwangaphambili. Kwaye kufanele ukuba igqwese kwimodeli efanayo ukusuka kwisizini ephelileyo ngandlela zonke. Kodwa nangona oku bekuyinyani ye-100%, iimodeli zonyaka ophelileyo zisesezitheminali zomsebenzi ophezulu. Kwaye sinokufumana ntoni ngesaphulelo esinomdla xa kuthelekiswa nexabiso lokwazisa.
Ngokomndilili, ubude bexesha lobomi be- I-smartphone iphantse yakudala kune-4 iminyaka, nangona sisazi ukuba kukho ukungafani. Siyazi nokuba ezinye izifundo ezenziwa ziinkampani zefowuni zibanga ukuba uninzi lwabasebenzisi Sitshintsha ii-smartphones rhoqo emva kweminyaka emibini. Ke, kunokwenzeka ukuba besisebenzisa i-smartphone eqhubeke ukuthengisa kunyaka ophelileyo, kwaye ingasigcina, ubuncinci unyaka omnye. Kungenxa yoko le nto ukuthenga into kunyaka ophelileyo kungekude, ngokuchaseneyo.
I-smartphone ephezulu, enamandla, kodwa engabizi
Ukuba sijonga i-smartphone kaGoogle ngokomzekelo, sibona ukuba ukusukela nini ukuba iPixel 3 entsha isungulwe, i-Pixel 2 ikhe yehla ngexabiso elimalunga ne-100 leerandi Utshintsho. Kule meko, nkqu nesaphulelo iseyisiphelo sendlela ephantse yathintela. Kodwa kusebenza njengomzekelo wokubona ukuba, mzuzu nje kuphuma imodeli entsha ye-smartphone, endala iyaqhubeka ukuthengiswa ixabiso eliphantsi kakhulu.
Umzekelo ocacileyo weli tyala wenzeka ngeApple. Kunyaka ophelileyo umzekelo, ngokuphuma kwintengiso Ifowuni ye-X kunye ne-iPhone 8, Intengiso ye-iPhone 7 inyuke kakhulu. Isizathu sicacile i-smartphone ekuqalisweni kwayo kunyaka ophelile ibiyifowuni elungileyo kakhulu, Emva konyaka omnye Qhubeka. Ngaba awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Iselfowuni "ephezulu" ukusuka kwisizini ephelileyo iseyinto elungileyo